Mbido AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ France Thierry Henry Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
LB na-egosi Full Story of a football footballius kasị mara aha na aha njirimara; 'El Mimo'. Anyị Thierry Henry Storymụaka Akụkọ ya na enweghị akwụkwọ akụkọ Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge.
Nyocha nke French, Premier League na Arsenal Football Legend gụnyere akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, ndụ ezinụlọ ya na ọtụtụ nkwụsị na ON-Pitch obere ihe ọmụma banyere ya. Na-amalite.
Thierry Henry Childhood Story - Oge mmalite na ezinụlọ:
A mụrụ Henry mgbe a mụrụ ya 17 August 1977 na Les Ulis, Essonne nke dị na Paris site na nna ya, Antoine Henry na nne ya, Maryse Henry.
Ndị nne na nna ahụ kwagara mba ọzọ. Nna ya, Antoine, bụ onye Guadeloupe (agwaetiti La Désirade), nne ya, Maryse, si Martinique. Ha abụọ bịara France iji mee ka ndụ ha ka mma.
Ezinụlọ Henry biri n'otu obere ụlọ ma ọnọdụ obibi anaghị akwado ya mana Antoine gbara Henry ume ka ọ kpọọ egwuregwu ma tinye ike ya n'egwuregwu.
Ọ na-akpọrọ Henry aga bọọlụ mpaghara. N'oge na-adịghị anya, Thierry Henry sooro ụmụntakịrị ndị ọzọ si mba ọzọ kwabata na-ekere òkè na mmelite na egwuregwu bọl.
N'oge na-adịghị anya, o doro anya na Henry bụ onye na-egwu bọl karịa ụmụaka ndị ọzọ nke ọgbọ ya. O malitere igwu egwu nke ndi otu ndi Les Ulis na Palaiseau. Mgbe ọ dị afọ 13, Henry malitere igwu egwuregwu ìgwè Viry-Chatillon n'okpuru n'okpuru 15.
Ikike ya dị oke mma iji mee ka ọ bụrụ ebe ọ ga-anọ na kọntaktị na-eto eto Les Ulis.
Thierry Henry Biography - Nkewa nke ndị mụrụ ya:
Naanị mgbe Thierry Henry chọrọ nne na nna ya ọtụtụ, ọdachi ahụ mere. Ma ndị nne na nna kewapụrụ. Ọ bụ nne ya meriri n'ọchịchọ ịchọrọ Hary mgbe ọtụtụ agha gachara maka ịmị nwa.
Nne ya wepụrụ ya na nna ya na ọmarịcha obodo bọọlụ ya gaa Orsay ebe o mere ka ọ banye n'ụlọ akwụkwọ Alexander Fleming iji lekwasị anya na agụmakwụkwọ. N'ịmara na ọ bụghị ọkpụkpọ ya, Aftery mechara pụọ. Ọ gbanwere bọl.
Na 14, e hoputara ya na Kọmitii Clairefontaine Academy nke French Football Federation.
Eziokwu Thierry Henry - Nchịkọta Ọrụ:
N'oge agụmakwụkwọ, Henry bịanyere aka na ya na onye njikwa nke òtù Monaco, Arsene Wenger. Ọ mere ka ọ bụrụ na ọ bụ na 1994 ka ọ na-agba bọl na njedebe 2-0 megide Nice. Wenger tinyere ya n'aka ekpe.
Na 1996, Henry ghọrọ onye ntorobịa France nke afọ n'okpuru nduzi na ọzụzụ nke Asene Wenger. O duuru ndị France n'okpuru Under-18 gaa European Championship ma weere ihe mgbaru ọsọ 7 na asọmpi ahụ
N'ihi ọrụ ya ndị mara mma na asọmpi ndị ọzọ, ọ ghọrọ akụkụ nke otu òtù ndị omeiwu nke FIFA World Cup 1998. Ọ nọgidere na-egwuri egwu maka Monaco ma mee ka onye ọ bụla nwee ọganihu ya. O meriri ihe mgbaru ọsọ 20 na nsonye 105.
Na 1999, Henry hapụrụ Monaco wee ghọọ akụkụ nke Juventus nke Italian Series A. A na-akwụ ya ụgwọ nke 10.5 nde pound iji sonyere ndị otu. N'afọ ahụ, ọ tụrụ ihe mgbaru ọsọ mbụ ya maka ìgwè ahụ, abụọ n'ime 3-1 mmeri nke ndị ndú ndị na-eme egwuregwu Lazio.
Mgbe oge ụfọdụ gasịrị, e zigara ya na Arsenal maka ngụkọta nke 11 nde pound ma n'ebe ahụ ka ọ nọ na ya na nna ochie ya bụ Arsene Wenger. Ndị ọzọ na-ekwu bụ akụkọ ihe mere eme.
Thierry Henry Claire Merry Akụkọ:
Thierry Henry na-eme ihe nkiri Claire Merry nke Bekee mgbe ọ na-esepụta Renault Clio na 2001. Ha abụọ hụrụ n'anya n'anya mbụ. Na July 5th 2003, ha lụrụ na Castlecleclere Castle.
Ha nwere nwa mbụ ha, Tea, na May 27th 2005. Ọ bụ ugbu a tozuru etozu.
Thierry Henry Divorce Akụkọ nke:
Onye egwu bọọlụ bụ Thierry Henry na onye na-eme ihe nkiri Sadie Hewlett malitere inwe mmekọrịta mgbe ha rụkọtara ọrụ n'otu foto ọnụ.
O doro anya na nwunye Henry bụ Claire Merry chọpụtara na di ya na-aghọ aghụghọ, ma gbaa akwụkwọ maka ịgba alụkwaghịm m 8m nke ọ gara.
Alụmdi na nwunye a na-egbu mgbu mere mgbe a kpọpụrụ Henry Henry na FC Barcelona.
Dị ka Henry si kwuo, "Divorcegba alụkwaghịm adịghị mfe, ọbụlagodi na nwa nwanyị nọ n'etiti". Onye a na - akpọ Arsenal, na - ekwukwa banyere ịhụnanya ya maka nwa ya Tea ma kwuo na ịghọ nna nyere aka ịgbanwe ya.
Thierry Henry Biography - Findchọta Againhụnanya Ọzọ:
Mgbe ya na nwunye ya gbara alụkwaghịm, Thierry Henry hụrụ ezigbo ịhụnanya ọzọ. Ọ banyere ngwa ngwa n'ime mmekọrịta ọhụrụ nke taa kwuru na ọ ga-adịgide ogologo oge karịa nke ikpeazụ ya.
Thierry Henry hụrụ ịhụnanya ọzọ na ụdị Bosnian Andrea Rajacic. Ha zutere na 2008 ma hụkwa ha na ezumike na ọpụpụ dị iche iche.
Ha dakọtara maka otu di na nwunye mara mma ma yie ka enweghị nsogbu na paradaịs. Otu na-eche ihe kpatara na ha abụọ alụbeghị di ma ọ bụ nwunye ma ọ bụ na ọ dị mgbe isiokwu a bilitere n'etiti ha.
N'eziokwu, n'oge a ọ dịghị mkpa itinye mgbanaka na ya ma gịnị kpatara imebi mmekọrịta dị mma na agbamakwụkwọ? Otutu ndi di na nwunye a na-alughi di na nwunye ma nwee obi uto kemgbe otutu afo.
Nyere na Thierry nọ n'ebe ahụ wee mee nke ahụ, ọ bụrụ na ọ bụ ọgba aghara, o yiri ka ọ ga-aghọta na ọ gaghị achọ ime ya ọzọ.
Thierry Henry Football arụsị:
NBA mgbe ha haziri otu mkparịta ụka pụrụ iche n'etiti otu akụkọ ha bụ Henry Kory Bryant, nke Hary Henry na basketball, bụ ebe ndị egwuregwu ahụ kwurịtara ihe oyiyi ha.
O juru onye ọ bụla anya ma ndị egwuregwu ahụ kpọrọ aha Dutch na akụkọ AC Milan, Marco van Basten, bụ onye a na-ewere dị ka otu n'ime egwuregwu kachasị mma nke oge ya.
"Marco van Basten bụ ọkacha mmasị m n'egwuregwu ahụ," ka Henry kwuru. “[Ọ bụ] otu n'ime ndị kacha mma egwuregwu na akụkọ ntolite. Ahụrụ m ya mgbe m bụ nwata na etu o si see bọọlụ dị egwu. Agbalịrị m i imitateomi ihe ọ bụla ọ na-eme. ”
Thierry Henry Biography Eziokwu - Ihe Mgbaru Ọkacha mmasị Ya:
Henry meriri ụfọdụ ezigbo egwu n'oge ya na Arsenal. Onye French ahụ meriri ihe mgbaru ọsọ 228 maka ndị Gunners ma na-aga n'ihu na-abụ onye mgbaru ọsọ kachasị elu na akụkọ ihe mere eme nke afọ 130 nke London.
Otú ọ dị, ihe mgbaru ọsọ ya kachasị amasị ya abụghị otu ebe ọ na-atụ egwu ma ọ bụ dribbled site na ọtụtụ ndị egwuregwu. Ọ bụ kama nke ahụ o meriri megide Leeds United na egwuregwu mbụ ya na uwe elu Arsenal.
Onye ahụ bụ nke m. Ọ gaghị agbada na akụkọ FA Cup mana ọ bụ oge mbụ m gbatara dị ka onye ofufe. ”Know mara, ebughị m n'uche ịlaghachi wee laghachi.
Enweghị m igwu egwu, m na-egwuri egwu. Enweghị m akara, agbatara m. Ọ bụ ihe mmetụta uche. Ọ bụghị banyere usoro ma ọ bụ banyere akara ahụ, ọ bụ ihe ọ pụtara nye m. ”
Thierry Henry Biography Eziokwu - Onye Ọkacha mmasị Premier League Player:
Nke a ga-enwe obi ụtọ na Manchester United Fans. Naanị na Eluigwe, Henry gosiri na onye ọkpụkpọ kacha mma ọ kpọlitere ma hụ na Premiya Njikọ abụghị onye ọzọ karịa akụkọ United States, Paul Scholes.
Henry kwuru na enwetụbeghị Scholes otuto ọ kwesịrị na onye etiti etiti dị oke mkpa maka ọganiihu Manchester United na oge Ferguson. Onye French ahụ kwukwara na ọ bụrụ na ọ ga - ahọrọ otu egwuregwu, ọ ga - agagharị na Scholes.
"(Ọ bụ) otu n'ime ndị kachasị mma, ma ọ bụrụ na ọ bụghị nke kachasị mma, m na-egwuri egwu, ọ nwere ike ime ihe ọ bụla." Ọ bụrụ na m nwere Paul Scholes na otu m, ihe niile ga-adị ya gburugburu.
Na Manchester United, ha hụrụ ya otu ahụ, mana echere m na Paul Scholes bụ otu n'ime ndị kachasị mma m lụrụ megide na ọgbakọ a, wee hụ ebe ọ bụla.
Hụrụ nri n'anya:
N'agbanyeghị na Arsene Wenger na-agbasi mbọ ike na nri edozi, Henry ga-agafe ọkara nke jelii juputara n'ihu egwuregwu ọ bụla. Ọ na-eburu isi n'isi.
N'agbanyeghị na ọ na-agbasi mbọ ike maka ahụ ike ya, onye French ahụ hụrụ ọmarịcha anụ ọkụkụ, peas, osikapa na nri Caribbean.
Thierry Henry Bio - Mentor Ya:
Thierry Henry akwụsịghị na Arsenal dị ka ọ na-eme. Nfefe a mere n'ezie mgbe enwere ohere n'etiti Wenger na Henry.
Onye kpughere onye kpughere na akwụkwọ akụkọ Arsenal, na ọ zutere Wenger na mberede n'ụgbọ elu na-aga Paris ma gosipụta ọchịchọ ya isonyere ya na Arsenal.
Onye nchịkwa Arsenal ahụ rutere ọrụ na Henry bụ onye na-egwu Arsenal na August 1999.
Mgbe ọ kwagara Juventus, ọ na-esiri Henry ike ịgbanwegharị na bọlbụ Italiantali. Ọnwa anọ ka ọ nọrọ ebe ahụ, ọ zutere Arsene Wenger na ụgbọ elu na-aga Paris ma gwa onye bụbu onye isi Monaco na ọ ga-achọ isonyere ya na Gunners.
Mgbe e rere Nicolas Anelka na Real Madrid n'oge okpomọkụ nke 1999, Wenger chetara mkparịta ụka ahụ wee kwụọ ndị Italiantali £ 10m maka nchekwa ya. Ọ rụpụtara nke ọma.
Thierry Henry Untold Biography Eziokwu - Ihe Nlekọta Mgbasa Ọtọ:
Akụkọ ahụ, na mkparịta ụka nkịtị Anọ Anọ Abụọ, gosipụtara na ya enweghị ọtụtụ ememme egwuregwu tupu oge egwuregwu na ọ ga-ege naanị egwu egwu rap ma ọ bụ egwu Zouk iji mee ya na mpaghara ahụ tupu egwuregwu. Fọdụ n'ime ndị ọkacha mmasị ya na-ese ihe bụ Dr Dre, Nkịta Snoop, Xzibit, Wu-Tang Klan na Tupac.
Egwú abụwo akụkụ buru ibu nke atụmatụ Henry tupu oge egwuregwu ma onye ọkpụkpọ ahụ nwere obi ụtọ na ndị nkụzi na ndị ọrụ na-emesapụ aka na ojiji n'oge a.
"Ọ na-arụ ọrụ dị iche iche maka m n'ihi na egwu na-adịgide adịgide ná ndụ m - ihe ọ bụla m na-eme. Mgbe m nọ n'ụlọ m, n'ime ụgbọ ala ahụ, ma na. Egwú na-eweghachite m n'ebe dị iche iche. Ọ bụrụ na m chọrọ ịlaghachi n'oge m bụ nwata ma hụ ka m na-egwu papa m, amaara m kpọmkwem ihe egwu ị ga-ege. Amakwaara m ihe egwu ị ga-eme iji tinye m n'ọnọdụ maka egwuregwu. "
Eziokwu Thierry Henry - Abụ Ọkacha mmasị:
Henry na-ekwusi ike mgbe niile na egwu bụ ụzọ ọ ga-esi banye na mpaghara ahụ. Ma abụ nke dị na listi ọkpụkpọ ya mgbe niile bụ Queen's 'We are the Champions'.
Onye France gosipụtara na ya ga-ege abụ ahụ mgbe niile ma kwuo 'Abụghị m', mana ozugbo France meriri World Cup, ọ malitere n'ezie ijikọ na egwu ahụ.
"Aga m echeta mgbe niile mmeri iko ụwa na ịnụrụ egwu ahụ - ha na-ejikọta m."
Ụdị Tattoo Thierry Henry:
Thierry Henry bụ nwoke a ma ama nke a makwaara maka ịhụnanya nke tatoos. O kpughepuola aka uwe aka ya zuru oke na aka nri ya, na-agbakwunye na nka ya.
A na-egbu egbu egbugbu ahụ na mpako n'aka ekpe nke nwoke ginger -ardardarded, nke yi uwe ojii ma yie olu ọla edo n'olu ya.
Ogbugbu ohuru na-agbakwunye ogwe aka ekpe ya na New York.
Ọnwụ ahụ na ogwe aka ekpe nke Henry nwere Statue of Liberty na ihe dị ka Bridge Bridge.
Nnukwu Nnukwu Nkata nke Nkata:
Ọ bụrụ na ị kwenyere na Henry bụ naanị onye na-agba bọl, ị hiere ụzọ. Onye egwu ahụ nwere, maka ebumnuche niile doro anya, enweghị mmasị Spurs mgbe ọ bịara n'ịgba bọọlụ, mana ọ bụ nnukwu San Antonio Spurs fan mgbe ọ bịara basketball.
N'ezie, a hụrụ ya n'oge ụfọdụ na-enye San Antonio Spurs okpu na jersey.
Kobe Bryant nke LA Lakers (nke lara ezumike nká ugbu a) na Tony Parker nke San Antonio bụ ndị egwuregwu abụọ Henry na-esokarị. Ọbụna onye French ahụ eletala Parker onye agbata obi ya n'oge mmemme ya.
Thierry Henry Ihe nkiri:
Enwere mmasị na fim na Henry abụghị nanị ikiri ha na nnukwu ihuenyo. Ndị French footballer nwekwara kpakpando na fim ole na ole. E wezụga na mgbaru ọsọ ihe nkiri vidio, onye French na-abanye na ya entourage, ihe nkiri vidio nke ihe ngosi TV a ma ama.
Henry abụrụla akụkụ nke akwụkwọ akụkọ dịka Onye na-eme ihe nchịkwa, Nweghachi na 1: 1 Thierry Henry, ha niile na-adabere na football n'otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ.
Hụrụ cinggba egwú:
Henry dị mma n'ụkwụ ya, ọ bụghị naanị mgbe ọ na-abịa n'ịgba chaa chaa, ma na-agba egwú. Onye na-akpọ ọkpụkpọ ahụ egosipụtakarị ihe ọ na-eme n'egwuregwu football na ụzọ dị iche iche dị egwu. Henry na-adabere na stereotype Carribean ma hụ egwuri egwu.
N'okwu ya, Lonely na Top, onye France gosipụtara na mgbe mmeri World Cup merie na 1998, ya na ndị ọzọ na-akpọ French na-agba egwu n'abalị na ụlọ egwú egwú na-agba egwú na iko nke World cup na n'etiti mgbe ọ na-emezi nnukwu ịgba egwú Russian nzọụkwụ.
Thierry Henry Biography - Oge Ya:
Arsenal Football Club taa na-asọpụrụ mmadụ atọ nke akụkọ ntụrụndụ nke Club site na ikpughe ihe oyiyi atọ n'èzí Stadium Emirates.
E meela nke Thierry Henry na ọla. Emere nke a na emume ncheta afọ iri abụọ na ise nke Arsenal.
Thierry Henry Biography - Ndụ LifeBogger: